China Laryngeal Mask Airway Yekushandisa Imwe fekitori uye vagadziri | Kangyuan
• 100 ％ yezvokurapa giredhi silicone yepamusoro biocompatibility.
• Isiri-epiglottis-bar dhizaini inopa nyore uye yakajeka kuwana kuburikidza nechiedza.
• 5 angular mitsara inoonekwa kana cuff iri yakati sandara chinzvimbo, iyo inogona kudzivirira cuff kuti deform panguva yekuisirwa.
• Yakadzika ndiro yeiyo cuff inopa yakanakisa chisimbiso uye inodzivirira iko kutadziswa kunokonzerwa neepiglottis ptosis.
• Kurapa kwakakosha kwecuffs pamusoro kunoderedza kuvuza uye kuchinja zvine mutsindo.
• Inokodzera vakuru, vana uye vacheche.
Kurongedza:5 pcs / bhokisi. 50 bv / atorwa
Saizi katoni: 60x40x28 masendimita
Chigadzirwa chacho chakakodzera kushandiswa muvarwere vanoda general anesthesia uye kumutsidzira zvekukurumidzira, kana kumisikidza kwenguva pfupi isiri yekumisikidza yekugadzira nzira yevarwere vanoda kufema.
Ichi chigadzirwa maererano nechimiro chinogona kukamurwa kuita chakajairika mhando, yakapetwa kaviri mhando, yakajairwa mhando, yakapetwa kaviri mhando ina. Iyo yakajairika mhando yekufemereka chubhu, yekuvhara bhegi fittings, inflatable chubhu, inoratidza airbag, akabatana uye inflatable vharafu; yakasimbiswa nemhepo yekufema chubhu, yekuvhara bhegi chinongedzo, aeration pombi. Kunongedzera kwetambo yemhepo inotungamira, (haigone), uye vharuvhu yekubatana; yakapetwa kaviri mhando nepombi yekufefetedza, dhayamita chubhu, bhegi fittings, inflatable chubhu, inoratidza airbag, majoini uye inflatable vharafu; pombi yakapetwa kaviri yakasimbiswa nemhepo yekufefetera, pombi yedhiraina, zvekuvhara bhegi, inflatable chubhu, chiratidzo iyo airbag, yekubatanidza sleeve pad, giraidhi tsvimbo (kwete), yekubatana uye yekuchaja vharuvhu. Simbisa uye kaviri yakasimbisa laryngeal mask pamadziro emukati yetrachea ine zvigadzirwa zvewaya yesimbi. Kusimbisa iyo yekufefetera chubhu, yemadhizaini chubhu, yekuvhara bhegi yekubatanidza chidimbu, yekubatanidza sleeve pad, inflatable chubhu, yemweya bhegi inotora mirairo yakagadzirwa nesilicon rabha zvinhu. Kana icho chigadzirwa chisina chena; mhete Oxygen ethane sterilization, ethylene oxide masara anofanira kunge ari pasi pe10μg / g.
[Model modhi] ona tafura pazasi:
Rudzi rwevazhinji, Yakasimbiswa mhando,
Rakajairika mhando nekaviri chubhu,
Iyo yakasimbiswa mhando ine mbiri chubhu
Kunonyanyisa inflation (Ml)
Inoshanda murwere / huremu hwemuviri (kg)
Mucheche6 ~ 10
Vana 10 ~ 20
Vana20 ~ 30
Mukuru 30 ~ 50
Mukuru 50 ~ 70
Mukuru 70 ~ 100
Mukuru ＞ 100
5. Uchishandisa ruoko rwerudyi kubata chinyoreso chakabata mask mask, kuita kuti chiwanikwe, munwe wekunongedzera uye wepakati chigunwe kurwisa chivharo chekubatanidza muviri uye iyo yekufefetera chubhu laryngeal mask, vhara muromo uchienda kunongedzo pamwe nepakati pejaya rezasi , rurimi runonamira pasi pharyngeal LMA, kudzamara pasisina kumbosvika parizvino. Zvakare unogona kushandisa inodzosera nzira yekuisa laryngeal mask, ingovhara muromo wakananga mukanwa, ichaiswa mumuromo kuenda kuhuro pazasi peye laryngeal mask, uye 180O mushure mekutenderera, uyezve ramba uchisimudzira pasi iyo laryngeal mask , kusvikira isingakwanise Push kusvika ikozvino. Paunenge uchishandisa yakakwidziridzwa kana ProSeal laryngeal mask ine giraidhi tsvimbo, iyo tsvimbo yekutungamira inogona kuiswa mukati memhepo mhango kusvika padanho rakatarwa, uye kuiswa kweye laryngeal mask inogona kudhonzwa mushure mekuiswa kweiyo laryngeal mask.
7. Zvinoenderana nemazita ekubhadharisa bhegi rizere negasi (huwandu hwemhepo haugone kupfuura mwero wekuzadza), batanidza iyo yekufema wedunhu uye woongorora kuti yakanaka yekufefetera, senge kufefetedza kana kutadzisa, inofanirwa maererano nematanho ekuiswazve laryngeal mask.
9. Chivharo chepahuro chinoburitswa kunze: mweya uri seri kwevhavha yemhepo yesirinji ine sirinji isina tsono inoburitswa kunze kwevhavha yehuro.
2. Kuwedzera zvisina kujairika kwemurwere nekubuda ropa munzvimbo yekufema.
3. Iko kugona kweanofema kuvharidzira varwere, senge huro, huturu, hematoma nezvimwe.
4. Murwere haana kukodzera kushandiswa kwechigadzirwa ichi.
1. Usati washandiswa unofanirwa kuve wakavakirwa pazera, uremu hwemuviri yesarudzo dzakasiyana dzemhando dzakatarwa dzemhando uye uone kana bhegi richivuza.
2. Ndokumbira utarise usati washandisa, senge inowanikwa mune imwechete (kurongedza) zvigadzirwa zvine zvinotevera mamiriro, kurambidzwa kwekushandisa kwe:
a) Inobudirira nguva yekudzivirira;
b) Chigadzirwa chakakuvara kana chine muviri wekunze.
3.Kushandisa kunofanirwa kucherechedza murwere thoracic chiitiko uye auscultation yemaviri mapato mweya wezwi kuona mweya yekufema mhedzisiro uye kupedzisa kufema kabhoni dhayokisaidhi kuongorora. Zvakadai sekuwanikwa kweiyo thoracic kana hurombo kana husiri kuchinja-shanduka hurefu hwekunzwa inzwa iko kubvu ruzha, inofanirwa kukwevera pakarepo laryngeal mask, mushure mekuzara oxygen zvakare mushure mekuisirwa.
4. Yakanaka kumanikidza kufefetedza, yemhepo kumanikidza haifanire kudarika 25cmH2O, kana inowanzo tenderera kana gasi mudumbu.
5. Varwere vane laryngeal mask vanofanirwa kutsanya vasati vashandiswa, kuitira kuti vadzivise mukana wekupokana-nekuyerera kwakasimudzira kushuvira kwezvirimo zvemudumbu panguva yakanaka yekumanikidza kufefetedza.
6. Ichi chigadzirwa is ethylene oxide sterilization, sterilization inoshanda kwemakore matatu.
7. Kana chibharumu chave nemweya wakawanda, mari yekuchaja haifanire kudarika mwero wakatarwa.
8. Ichi chigadzirwa chekushandisa kiriniki, kuvhiyiwa uye kushandiswa nevashandi vekurapa, mushure mekuparadzwa.
Zvigadzirwa zvinofanirwa kuchengetwa munzvimbo ine hunyoro isingasvike 80%, iyo tembiricha haina kupfuura 40 degrees Celsius, hapana magasi anoparadza uye yakanaka yekufefetedza yakachena kamuri.
[Zuva rekugadzira] Ona mukati yekutakura chitaridzi
[Tsanangudzo zuva rekuburitsa kana zuva rekudzokorora]
Tsananguro yekuburitsa zuva: Gunyana 30, 2016
Mugadziri: HAIYAN KANGYUAN MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD
Pashure: Endotracheal Tube ine Yakakosha Tip
Zvadaro: Silicone Foley Catheter ine Kupisa Kuongorora
Laryngeal Mask Airway fekitori
laryngeal mask airway mugadziri
laryngeal mask airway mutengesi
laryngeal mask fekitori
silicone laryngeal mask yemhepo
silicone laryngeal mask airway mugadziri
silicone laryngeal mask airway mutengesi
silicone laryngeal mask fekitori